Akụkọ - ọkụ ọkụ
Mmepụta nchekwa dị mkpa karịa ihe ọ bụla. Jiangsu Xingyong Aluminium Technology Co., Ltd. na -etinye mmepụta nchekwa na mbụ iji hụ na ndị ọrụ nwere ike iji ozi mepere emepe rụọ ọrụ wee hapụ ọrụ n'udo.
Jiangsu Xingyong Aluminium Technology Co., Ltd. na -ebugara ndị ọrụ ọrụ mmepụta nchekwa na nzukọ ụtụtụ kwa ụbọchị, ndị ọrụ niile ga -eyiri okpu agha nchekwa n'ebe ọrụ. Mgbe a na -arụ ọrụ igwe n'ime ụlọ ọrụ mgbapụ, ụlọ ọrụ ahụ ga -eyi akpụkpọ ụkwụ nchebe ọrụ jikọtara ọnụ, ndị ọrụ na -anya ụgbọ ala na ebe a na -arụzi ọrụ ga -eyi eriri nchekwa na eriri nchekwa.
Igwe ọ bụla dị na Jiangsu Xingyong Aluminom Technology Co., Ltd. nwere ntuziaka ọrụ nchekwa yana ọzụzụ maka ndị ọrụ ọhụrụ ka esi arụ ọrụ n'enweghị nsogbu. Mgbe ụlọ ọrụ na -agbasa echiche ugboro ugboro, ndị ọrụ niile maara mkpa ọ dị imepụta ihe dị mma ma na -arụkọ ọrụ ọnụ iji mejupụta ihe achọrọ maka imepụta ihe dị mma. A na -arụzi igwe ndị ahụ dịka ihe ntuziaka ọrụ nchekwa siri chọọ iji gbochie nsogbu tupu ha emee.
Jiangsu Xingyang Aluminium Technology Co., Ltd. nwere ihe nchekwa nchekwa ọkụ na ihe mgbanyụ ọkụ n'ọmụmụ ihe ọ bụla. Ngalaba nchekwa ga -eleba anya ma enwere ike iji plọg nchekwa na ihe mgbanyụ ọkụ na mbido na etiti ọnwa ọ bụla, ma ọ bụrụ na ha agabigala, dochie ha na ndị ọhụrụ n'oge ọ bụla wee mee ndekọ ndekọ zuru ezu.
Jiangsu Xingyong Aluminium Technology Co., Ltd. na -ejide ọkụ ọkụ 2 kwa afọ ma mee ka ọ bụrụ iwu na ndị ọrụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ ga -esonye na ọkụ ọkụ. Anyị na -agbasi mbọ ike ka onye ọrụ ọ bụla nwee ike rụọ ọrụ na -emenyụ ọkụ. Ná mmalite nke ọkụ ọkụ, onye isi njikwa nke ngalaba nchịkwa na -akụziri ndị ọrụ mkpa nchekwa na otu esi arụ ọrụ na -emenyụ ọkụ. Ọ bụrụ na a zute ọkụ, a na -ebu ụzọ kọọ mkpu ọkụ, onye isi ọrụ na -agwa ndị ọrụ ka ha gbapụ ebe ahụ n'usoro, ndị ọrụ a họpụtara ga -ejikwa ihe mmenyụ ọkụ iji gbanyụọ ọkụ ahụ. N'okpuru nduzi nke ngalaba nchekwa, ndị ọrụ ji ịnụ ọkụ n'obi debanye aha iji rụọ ihe emenyụ ọkụ.